१७ जना वीरका चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा Global TV Nepal
डिजेलमा २८ रुपैयाँ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ मूल्य घटाउने सरकारको तयारी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउँदै सरकार प्रचण्डले आरोपहरू फिर्ता लिन सक्दिनँ भन्नुभयो,लिनुभएको भए सायद पार्टी एकता जोगिन्थ्यो : वामदेव गौतम सिसडोलको ‘लिचेट’ प्रशोधनमा प्रभावकारी नतिजा आयो : बालेन साह चुनाव नजिकिदैछ, छैन् दलको एजेण्डा, को बन्ला चुनावपछिको प्रधानमन्त्री महानगरको बजेट सार्वजनिक(हेर्नुहोस भिडियो) अपरिपक्व देखिए माधव, आफ्नैले टेर्दैनन्, अरुले अपमान गरिरहन्छन् (हेर्नुहोस भिडियो) प्रितिबाट युनिकोड | युनिकोडबाट प्रिति
१७ जना वीरका चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
काठमाडौं । कोभिड १९ महामारीको उपचारका क्रममा अस्पताल प्रशासनले आफ्ना माग र सुरक्षामा कुनै ध्यान नदिएको भन्दै मेडिकल अधिकृतहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् ।
अस्पतालको निर्देशकलाई बुझाएको राजीनामा पत्रमा लेखिएको छ, ‘माहामारीमा काम गर्दा हाम्रा माग हजुरहरु सामु पेस गरिरहँदा पनि बेवास्ता गरेको, आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध नगराएको, ज्यालादारी भनेर अपमानित गर्दै दसैँतिहार भत्ता समेत नदिएकाले हाम्रो मनोवल गिरेको जानकारी गराउन चाहान्छौँ ।’ धम्कीसहित जवरजस्ती हप्ताको ९६ घण्टासम्म ड्युटि गराएको तर, सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएको पनि चिकित्सकहरुले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
तर, अहिले वीर अस्पतालको आकास्मिक कक्षको उपचार भने सञ्चालनमै रहेको छ । ‘कि हामीले भनेअनुसार काम गर कि राजीनामा देऊ भनेपछि हामीले राजीनामा दिएका हौँ’, डा. भविन्द्र कार्कीले भने, ‘तर, राजीनामा स्वीकृत नहुँदासम्म हामीले काम गरिरहन्छौँ, चिकित्सकको धर्म छाड्दैनौँ ।’ अहिलेसम्म वीर अस्पतालका आकास्मिक कक्ष मेडिकल अधिकृतहरुले नै धानिरहेका छन् । तर, उक्त कक्षमा सुरुवाती चरणमा कोभिड र नन कोभिड दुवै विरामीलाई राखेर उपचार गरिन्छ ।
दसैँ नजिकिँदै गर्दा वीर अस्पतालका चिकित्सकहरुले गत २ कात्तिकमा आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरुले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का पदाधिकारी बसेको कोठामा ताला लगाएका थिए ।
सुरक्षा र कोभिड भत्ताको माग राख्दै १५ दिने म्याद राखेर लिखित माग प्रस्तुत गरिए पनि कुनै सम्बोधन नभएपछि उनीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । ‘त्यतिबेला उहाँहरुले थम्थम्याउनुभयो तर, हाम्रो मागलाई पूरै बेवास्ता गर्नुभयो’, डा. कार्कीले भने ।
अस्पतालका डाइरेक्टर डा. केदार सेन्चुरीले भने डाक्टरहरुले काम गर्दैनौँ भन्न नमिल्ने बताए । उनले माग सम्बोधनको विषयमा पदाधिकारीहरुबीच छलफल भइरहेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘मागहरु सामान्य छन् । कोभिड भत्ता आउन अलि ढिला भएको मात्र हो ।’
प्रधानमन्त्री देउवाको राष्ट्रपतिसँग भेट
रुपा सुनार प्रकरणमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले माफी मागे
सरकारविरुद्ध विभिन्न विद्यार्थी संगठनको प्रदर्शन
देश नै आन्दोलित छ, प्रतिगमन नसच्चिए ६२–६३ सालको भन्दा ठूलो आन्दोलनको आधीबेरी आउँछ – झलनाथ खनाल #LiveUpdate
वर्तमान सरकार आएदेखि अपराधिकरणको सुरुवात भएको सांसद भट्टराईको आरोप